#Akan Poems – Mum Cee
Tag: #Akan Poems
No Comments on ANIMTIA
Animtia nnyɛ ɛsom aduroNa asomfo anom de wɔn kotodwe…ananti ɔyiaw mmosia so dabiaaAnimtia wɔ hɔ yi, ɛtesɛ nsuo…sɛ ɛtae apɔnkyerɛni aNe mene mu kwan bubu te sɛ Jɛriko Afasuo no…ma nsu gurunyee no dani nsu fi…gye wuɔ bɛgu awuranom nan aseNti dwene san dwene bio…ansa w’abu wo yɔnko animtia B.Nnipa odwan betumi adani apɔnkye…sɛ animtia […]
Tags #Akan Poems, #AkanPoemsAboutEnslavement, #Anwensem, #GhanaianLanguagePoems, #TwiPoetry, Life
2 Comments on ABROKWAH MMADWOA
2 Comments on AKUAFOƆ NSAMRANE
Yɛ se yɛn mmra nantinkwa …na kro kyea hyɛ me nan yi Yɛ se yɛn mmra ano nkatumuo …na kasa ɛgoro m’anum yi Yɛ se yɛn mmra nsa pan …na gong gong ɛgoro me nsa ano yi M’adane ɔpatuo wɔ nnomaa a wɔkɔ anɔpa su krom Me yɛ dɛn goro serehehe? II Ɛnnyɛ abɔfo tuo […]
a. Ɛyɛ maapɛ na ɛmaa Kwaku …n’apɔnkye din Ne merɛ so no Na onnim ɔbaa kitiwa …ɔbaa kɛseɛ …ɔbaa tiatia …ɔbaa tintin …ɔbaa berima …ɔbaa warefoɔ …ɔbaatan mpo na w’akohunu ɔbaa yarefoɔ Sika boa ma owurawura ayaase ahorow …kosi sɛ ɔware ɔbaa animonyamfoɔ a ɔwɔ Krɔwaso b. Abaawa Afua ne Apɔnkye abakan …kɔyɛɛ abaayowa Abaawa […]
7 Comments on AKUKU-ADAMFOƆ
Na ɔmama abɔ mma …ama ɔnam a, na n’abati ɛɛto ahantan nnwom Efirisɛ na obu ne ho okukudam N’ɛnso wɔn a wɔhyɛ n’ase nyinaa buu no okuku-ɔdamfoɔ nnyɛ nɛ II Wo bisa sɛ ɛdeɛn ntira? Ɛneɛ tie ɛ Ɔde suahunu ɛkɔtena suatera dua ase …de pia pia nsukɔnoma kɔ dua no so Ɔfaa nyamberansɛm yi […]
Tags #Akan Poems, #Akuku-adamfoɔ, POETRY., Twi poems
8 Comments on AYASE NTƆKWA
Akasa akasa bebree yi fapem ne sɛn? Yɛse yɛse mframa ɛɛkeka ammodin dɔ ho asɛm Bɔyiɛ! Ib Ano jejejeje bɔ awerɛfie Sɛ sɛbi, yɛ nto ɛdan akyi pono mu Paapa, …ansa na wo bɛ bue w’ano no Hwɛ hunu sɛ Wo dan akyi pono mu ato danwee Efirisɛ ɔdɔ mu akronfoɔ kyere woa …ɛɛdɛ sene […]
Tags #Akan Poems, LGTBQ, POETRY., Twi poems